IMM မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခကြေးငွေအသစ်ရှင်းလင်းချက် - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နယူးကြေးဇယားဖျေါပွခကျြ
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ငါအသစ်များကိုအခကြေးငွေအချိန်ဇယား IMM ဖော်ပြချက်ရောက်ရှိ
ကျောင်းစာအုပ်န်ထမ်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, အငှားယာဉ်များ, minibuses ဒေသခံကူးတို့ဖွငျ့တရားစွဲဆိုအသစ်သောအခွန်နှင့်အတူတက္ကစီစာချုပ်သက်တမ်းကုန်။ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေအတွက်Xnumx'lükရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာသည်ကျောင်းအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများဖန်ဆင်းတော်မူပြီနေစဉ်။
အစ္စတန်ဘူလ်ဖြတ်ပြီး operating ယနေ့ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးတွင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME), တက္ကစီ, မီနီဘတ်စ်, တက္ကစီ minibuses, ကျောင်းများနှင့်ဒေသခံကူးတို့ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝန်ထမ်းများကတရားစွဲဆိုအသစ်သောအခွန်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။
အခကြေးငွေအချိန်ဇယား; နိုင်ငံသားများ၏တန်ဖိုးလျော့ကုန်ကျစရိတ်အတွက်တိုးနှင့်အတူငွေဖောင်းပွမှုကိန်းဂဏန်းများ, အကောင့်လောင်စာစရိတ်နှင့်ဝင်ငွေအဆင့်အတန်းသို့ယူကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိတက္ကစီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကျော်လုပ်ခအတွက် 25% ပျမ်းမျှအားတိုးအောင်; 5, £အကောက်အခွန်အနေဖြင့် 3,10, 13 အကောင်အထည်ဖော်မှုနှုန်းခရီးစဉ်နှုန်းနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေ, နှုန်းနဲ့ဆင်းသက်ကြေး
လက်ရှိအခကြေးငွေကျော် 25% တိုးအောင်အတွက်မီနီဘတ်စ်;0အကောင်အထည်ဖော်မှုနှုန်းကျောင်းသား / ပြီးနောက်61,5 ကီလိုမီတာနှုန်း, 6-2 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကြေး (Indie-စီး) နှုန်း02-2,5 ကီလိုမီတာ,
လက်ရှိအခကြေးငွေကျော် 24% တိုးများအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်မီနီဘတ်စ်တက္ကစီခ,
လက်ရှိအခကြေးငွေကျော် 13% တိုးဖန်ဆင်းကျောင်းသားဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များ; ကီလိုမီတာနှုန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု 0-1 243 ကနေအတိုဆုံးအကွာအဝေး,
ဝန်ထမ်းများလက်ရှိတူရိယာကျော်ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေအတွက် 13% တိုး လုပ်. , ကားကိုအစောပိုင်းထွက်ခွာအခကြေးငွေအတွက်ထိုင်ခုံနှုန်း 10-17 124, ကီလိုမီတာနှုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုအကောငျအထညျဖျော 1,26 များအတွက်အခကြေးငွေ,
စီးတီး Lines Istinye - ပိတ်ပင် 20% အထိကြိုပို့ယာဉ်ကိုကားဖြတ်သန်းခနှင့်မိန်းမဆောင် - ယူဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ကားတစ်စီးဖြတ်သန်းခအတွက် Sirkeci 10% တိုး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ UKOME အစည်းအဝေး, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအသုံးပြုမှု 50% လျှော့စျေးအတွင်းယူဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပို့။
အစ္စတန်ဘူလ်ညက Metro လေဆိပ်စွပ်စွဲချက် 31 / 08 / 2019 IMM İmamoğluသမ္မတ, "ဤမြို့သည် 24 နာရီနေထိုင်သော" ကအစ္စတန်ဘူလ် 24 အချိန်ခရီးသွား "ကာလ၌ '' အစ္စတန်ဘူလ်၏နေထိုင်သူများမှသတငျးကောငျးအပ်ပေးတော်မူ၏ဟုပြောဆိုလျက်, သြဂုတ်လ 30 ညဥ့်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေ့စတင်ခဲ့တယ်။ အသစ်ကလျှောက်လွှာနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်, တနင်္ဂနွေကမ်ဘာပျေါမှာရှစ်လိုမြို့ကြီးပြထိုညဉ့်မြေအောက်ရထားဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယခုမွို့၌6အများဆုံးအသုံးပြုမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုတရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်, ဘာသာရေးအားလပ်ရက်များနှင့်တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းအပါအဝင်အစ္စတန်ဘူလ် 24 နာရီကို run ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးဌာန၌အစ္စတန်ဘူလ်၏နေထိုင်သူများအစေခံရန် Started, ဒီသစ်ကိုလျှောက်လွှာမူဘောင်ညဥ့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများပါဝင်သည်: M1 Yenikapi-Ataturk လေဆိပ်က Metro လိုင်း, M1B Yenikapi-Kirazli မီထရိုလိုင်း, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosmanမီထရိုလိုင်း ...
Izmir အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "သမ္မတနိုင်ငံနေ့အကောက်အခွန်" အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "1 တစ်ပြား" 27 / 10 / 2017 မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်မှာ "29 တစ်ပြား" ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုသောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကောက်အခွန်İzmirlilerများအတွက် 1 အောက်တိုဘာလသမ္မတနိုင်ငံနေ့သန်းခေါင်တိုင်အောင်နာရီတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သမ္မတနိုင်ငံစတုရန်းနှင့်ကူးတို့, မြေအောက်ရထားအဖြစ်အချို့သောဘတ်စ်ကားလိုင်းများတွင်ကျင်းပလိမ့်ကြောင့် Gundogdu အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပကိုလည်းအပိုဆောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, တူရကီ 94 သမ္မတနိုင်ငံ။ ကြောင့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စည်းရုံးရေးများအတွက်နင်္ဂနွေနေ့အောက်တိုဘာလ 29 "1 တစ်ပြား" အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကောက်အခွန်အပေါ်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်မှအခမ်းအနားတွင်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သမ္မတနိုင်ငံရင်ပြင်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ပြန်လာ Gundogdu ရင်ပြင်မှာကျင်းပမည့်ပွဲစဉ်များတွင်ပါဝင်ရန်ဦးမည်သေချာစေရန်အချိန်ဇယားသန်းခေါင်တိုင်အောင်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ...
Olympos Teleferik မှဖခင်များနေ့အထူး Tariff '' 17 / 06 / 2012 Antalya ဖခင်ထဲမှာ "ဖခင်များနေ့" မေ့လျော့တော်မမူခဲ့အနေအထား "Olympos Cableway" တွင်အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ဥရောပအရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားများ၏အရေးအပါဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများယခုနှစ်အတွင်းအဖြစ်အားလုံးအထူးအခါသမယတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဇွန်လဖခင်များနေ့ကိုအထူးစျေးနှုန်း 17 2012 တနင်္ဂနွေအရာရှိများယူပြီး cable ကိုကားများ, လူကြီး£ 30 ထိုနေ့ရန်။ အစာစား,7နှင့် 16 အရွယ်ကလေး tl.y အသက် 15-06ကလေးများတာဝန်ခံအခမဲ့များမှာသာဖခင်အထူးဒီလှပတဲ့နေ့ရက်ကိုခံစားကြည့်ပါထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, cable ကိုကားတစ်စီး Olympos ရှိတ်စပီးယားလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရောက်ရှိလာသောဧည့်သည်များ၏နေထိုင်၏ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကြာချိန်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲယူ ...
Izmir အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "သမ္မတနိုင်ငံနေ့အကောက်အခွန်" အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "1 တစ်ပြား"
Olympos Teleferik မှဖခင်များနေ့အထူး Tariff ''
Izmir အတွက် 29 အောက်တိုဘာလသမ္မတနိုင်ငံနေ့မှပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခွန်: 1 တစ်ပြားမှဖြစ်
အကူးအပြောင်း Tariff 29 အောက်တိုဘာလ! တိုးချဲ့ရေကြောင်းခရီးရှည်
Alanya cable ကိုကားထဲတွင်နယူး Tariff